घरमै छन्, कपाल सेतो हुनबाट जोगाउने उपायहरु - ज्ञानविज्ञान
कलिलो उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याबाट धेरै मानिस हैरान भएका हुन्छन् । फुलेको कपालले गर्दा सौन्दर्यमा ह्रास आउने तथा व्यक्तित्वमा असर असर पर्ने गर्छ । यही भएर पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन मानिसले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन् ।
आजभोलि बजारमा आएका विभिन्न अप्राकृतिक कलरले हाम्रो कपाललाई झनै बढि हानि पुर्याउने गर्छ । त्यसै कारण प्याकेटका रङ भन्दा प्राकृतिक वस्तुहरुको प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुने विशेषज्ञहरु बताउछन् ।राति ढिलो समयसम्म नसुत्ने , खानपानमा ध्यान नदिने र धेरै तनाव लिने समस्याका कारण आजभोलि जवानीमै मानिसहरुको कपाल फुल्ने गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो कपालमा मेलेनिन नामक पिगमेन्ट हुन्छ जसले कपाल कालो वा सेतो हुने भनेर निर्धारण गरेको हुन्छ । कम उमेरमै मेलेनिन बन्न रोकिएपछि जवानीमै मानिसको कपाल सेतो हुन थाल्छ । तर यदि यी प्राकृतिक उपाय अपनाउने हो भने कपाल फुल्नबाट बँच्न सकिन्छ ।
तपाईं नरिवलको तेल कत्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ रु यदि प्रयोग गर्ने बानी छैन भने आजैदेखि प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस् । नरिवलको तेलले तपाईंको कपाललाई निकै फाइदा पुर्‍याउँछ ।
नरिवलको तेलले कपाल मालिस गर्दा कपाल कालो बनाउन मात्र मद्दत गर्दैन, बलियो पनि बनाउँछ । यसले कपाल झर्ने समस्याबाट पनि छुटकारा दिन्छ । नरिवलको तेल सर्वसुलभ रूपमा पाइने भएकाले पनि प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ ।
अमलामा एन्टिअक्सिडेसन हुन्छ, जसले कपालका कोषिकाहरूलाई सेतो हुन दिँदैन । त्यसका लागि अमलाको धुलोले नुहाउनुपर्छ वा मेहदीसँग मिलाएर लगाउनुपर्छ ।
अमलाले कपाललाई मजबुत बनाउन पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । अमलाको धुलोलाई कपालमा लगाएमा कपाल सेतो हुने, झर्ने, चुँडिने र पातलो हुने समस्याबाट बिस्तारै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
खानपानमा अलिकति ध्यान दिने हो भने पनि कपाल फुल्न वा सेतो हुन पाउँदैन । भिटामिन बी–१२ युक्त खानाको प्रयोगले कम उमेरमै कपाल फुल्न पाउँदैन ।
यदि तपाईं शाकाहारी हुनुहुन्छ भने दूध र दूधजन्य पदार्थको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । नत्र माछा, अन्डा, मेवा, कुखुराको मासु पनि दैनिक रूपमा मात्रा मिलाएर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । यस्ता खाद्यपदार्थबाट प्रचुरमा मात्रामा भिटामिन बी–१२ प्राप्त हुन्छ ।
कालो तिललाई केही समय पानीमा भिजाइदिने अनि लगाउने हो भने यसले बढ्दो उमेरमा तपाईको कपाल सेतो हुनबाट बचाउँछ ।
काँचो मेवा पिसेर लगाउने गरेमा कपाल कालो भइरहन्छ ।
किन कम उमेरमै कपाल सेतो हुन्छ ? याे पनि जानिराखाैँ
कम उमेरमै कपाल सेतो हुने एउटा नयाँ ट्रेन्ड नै बनेको छ । गुगल ट्रेन्ड सर्चका अनुसार पछिल्लो दश वर्षमा गुगलमा सेतो कपालका बारेमा खोजी गर्नेहरुको संख्या निकै बढेको छ । सन २०१५ पछि त यो संख्या झनै बढेको छ ।
छाला तथा कपाल सम्बन्धी भारतीय विशेषज्ञ डा. दीपाली भारद्वाजका अनुसार कम उमेरमै कपाल सेतो हुनु एउटा रोग हो । मेडिकल भाषामा यसलाई केनाइटिस भनिन्छ ।
इन्डियन जर्नल अफ डर्मेटोलोजीमा सन २०१६ मा प्रकाशित शोधका अनुसार भारतमा केनाइटिसका लागि २० वर्षको उमेत तोकिएको छ । भारत लगायतका दक्षिण एशियाली मुलुकमा २० वर्ष वा त्यस भन्दा पहिले कपाल सेतो हुन सुरु गर्यो भने त्यसलाई केनाइटिस रोगको संकेतका रुपमा बुझिन्छ ।
दिल्लीको सफदरजंगमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका कपालका डाक्टर अमरेन्द्र कुमारका अनुसार केनाइटिसमा कपालको रंगमा पिगमेन्ट उत्पादन गर्ने सेलमा समस्या आउन सुरु गर्छ, यसले गर्दा कपाल सेतो हुन सुरु हुन्छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यस्तो रोग लाग्नुका पछाडी विभिन्न कारण रहेका हुन्छन्, कतिपय अवस्था वंशाणुगत गुणले पनि यस्तो हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा खानपिन, प्रोटीन र कपरको कमी, तथा हर्माेनको कारणले पनि यस्तो समस्या हुन्छ । मानव शरीरमा हेमोग्लोबिनको कमी, एनीमिया, थाइराइड जस्ता समस्याले पनि छिटो कपाल सेतो हुने समस्या हुन्छ ।
कपाल किन छिटो सेतो हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वभर विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान भएका छन् । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ ब्रेडफोर्डका प्रोफेसर डेसमण्ड टोबीनका अनुसार यूरोपमा २० वर्षको उमेरका कपाल सेतो हुनुलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ ।
कपालको रंग कम उमेरमै सेतो हुनुमा मानव शरीरमा पाइने जीन जिम्मेवार मानिन्छ । अध्यनबाट के कुरा पत्ता लागेको छ भने, फरक फरक नस्लका मानिसमा कपाल सेतो हुने प्रकृया पनि फरक फरक हुने गर्छ । अफ्रिका र पूर्वी एशियाली मुलुकका मानिसको कपाल सामान्यतया एउटा निश्चित उमेर पार गरिसकेपछि मात्र सेतो हुन सुरु हुन्छ ।
केनाइटिसको समस्याका लागि विभिन्न किसिमका औषधीहरु प्नि बजारमा उपलब्ध हुन्छन् तर यसबाट २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र सफलता मिल्ने अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार कम उमेरमा कपाल सेतो हुनबाट जोगाउन खानपिनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यस्तै खानामा बायोटिन (एक प्रकारको भिटामिन) समावेस गर्ने, कपालमा कुनै किसिमको रसायनको प्रयोग नगर्ने, चायाँ हटाउने शैम्पू सातामा दुई पटक भन्दा बढी प्रयोग गर्न नहुने विशेषज्ञहरुको सुझाव छ ।
हामीले केहि थप जानकारी दिइएकाे छाै
भिटामिन सीका फाइदाहरु
१. घाउ भर्छ
भिटामिन सीमा उत्कृष्ट हिलिङ पावर हुन्छ । जसले छालाको घाउ चाँडै भर्न मद्धत गर्छ । प्रतिरोध क्षमता कम भएको स्थितिमा यसले संक्रमण फैलन र रोगबाट बच्न सहयोग गर्छ ।
यसमा पाइने एन्टी हिस्टामाइन तत्वले एलर्जीबाट बचाएर त्यसको लक्षणबाट पनि बचाउँछ । सामान्य चिसोमा पनि भिटामिन सीको प्रयोग गरेर शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ ।
भिटामिन सीले दिमागलाई स्वस्थ राख्नेमात्र होइन तनावबाट लड्ने एड्रिनेल नामक हर्मोन पनि उत्पादन गरेर तनावबाट बच्न सहयोग गर्छ ।
४. जोर्नीको दुखाई
जोर्नीमा कोलेजन र कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हुँदा, उमेर बढ्दा या कुनै संक्रमणका कारण जोर्नी दुख्ने समस्या आउँछ । भिटामिन सीले जोर्नीका लागि कोलेजन नामक प्रोटीनको निर्माण गर्छ, जसले जोर्नीको दुखाईमा राहत दिन्छ ।
भिटामिन सी एक उत्कृष्ट एन्टी अक्सिडेन्ट हो । यसले क्यान्सर र अन्य समस्या पैदा गर्ने फ्रि रेडिकल्सबाट बचाउँछ । यसले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाएर क्यान्सरसंग लड्नमा सहयोग गर्छ । यस्तै कोशिका र डीएनएमा हुने परिवर्तनबाट पनि बचाउँछ ।
भिटामिन सीमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्ट मुटुका लागि लाभदायक हुन्छ । यसले मुटुको समस्याबाट बचाउँछ र धमनी क्षतिग्रस्त हुनबाट बचाउँछ । रक्तकोशिकामा कोलेस्टेरोल जम्नबाट बचाँउछ, जसबाट हृदयाघात र ब्रेनस्ट्रोक हुने खतरा कम हुन्छ । यसले कोशिकाहरुमा रक्तप्रवाहलाई सामान्य बनाउँछ ।
भिटामिन सीले शरीरमा दमका लागि जिम्मेवार मानिएको हिस्टामाइनको उत्पादनलाई कम गर्छ । जसबाट दम या श्वाससम्बन्धी समस्याको सम्भावनालाई कम गर्छ । भिटामिन सीको एन्टीअक्सिडेन्ट तत्वले फोक्सोको सफाई गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
केहि घरेलु औषधी जसको प्रयोगबाट पिलो निको पार्न सकिन्छ
एन्टिबायोटिक तत्वले भरिपूर्ण निममा एन्टि–माइक्रोबियल गुण हुन्छ । बिनासाइड इफेक्ट निमले शरीरबाट पिलो निको पार्न मद्दत गर्छ । निमलाई पिसेर लेप बनाई पिलोको वरिपरि लगाउनु पर्छ ।
पिलोको राम्रो औषधी बेसार पनि हो । बेसारमा एन्टि–एन्फ्लेमेन्टरी तथा नेचुरल ब्याड प्युरिफिकेसन तत्व हुन्छ । बेसारको प्रयोगले घाउको दुःखाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।
पिलोको वरिपरि बेसारको लेप बनाएर लगाएको खण्डमा यसबाट छिट्टै राहत पाउन सकिन्छ । यस्तै, एक गिलास दूधमा एक चम्चा बेसार हालेर ४/५ दिनसम्म पिएको खण्डमा पनि पिलो छिट्टै निको हुन्छ ।
लसुन पिसेर लेप बनाएर घाउमा लगाउनाले वा दैनिक २÷३ वटा काँचो लसुनको पोटी चपाएर खानाले पनि पिलोबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
याे‍ भिडियाे पनि हेर्नुहाेला
Don't Miss it मित्रताको महत्व कति सम्म हुन्छ ? कस्ता सम्बन्ध लामो समय टिक्छन र कस्ता टिक्दैनन् ? जानीराखौ
Up Next दरिद्रता हुन बाट बच्नको लागि के गर्ने ? घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विहानै गरौं यी काम – जानीराखौ
भाइरसबाट बच्‍न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने यी हुन् आयुर्वेदीय काइदा
डा. रामदेव पंडित – सामान्य भाषा इम्युनिटी भनेको जीवनको एक बिशेष खालको क्षमता वा शक्ति हो, जसले शरीरलाई रोग लाग्नबाट…
हर्रो र बर्रो खानुका फाईदा एकदम खरो, यस्ता रोगहरुसंग लड्न पनि यी दुईले मद्दत पुर्याउछ
हर्रो र बर्रो आयुर्वेदिक औषधिका लागि प्रयोग हुने अत्यन्तै उपयोगी फल हुन् । हर्रो नेपालको मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रमा करिब…
मेथी दानामा धेरै प्रकारका पोषक तत्व हुने भएकाले यस्को सागको तरकारी खानाले या दानाको सेवनले शरीरको रगत शुद्ध हुने र…
आफ्नै बारीमा लगाउन सकिन्छ स्ट्रबेरी जानिराखाैँ
हिमाली तथा केही पहाडी जिल्लामा स्ट्रबेरी खेती हुदैँ आएको छ । धेरै जसोले यसलाई ब्यावसायिक खेतीमा रुपमा अंगाल्न सकेका छैनन्…